AFLAANTA | HOYGA WARARKA CAALAMKA | Page 2
Daawo:- Farxiya Kabayare, Shaley iyo Maanta!
Heestaan waxaa qaaday Farxiyo Kabayare waxaana loogu magic daray Hubaal waxa ayna kamid yihiin heesihii ugu horeyay ee qaado waxayna aheyd markaas gabar aad u da”yar AKHRISTE isma weydiisay Farqiga u dhaxeya Shaley iyo Maanta Heestaan waxaa la yiraahdaa DHAKAC DHAKAC waxa ayna kamid tahay heesaha ay qaado Farxiya Kabayare, kuwa aadka loo dhageysto. isweydii Farqiga u dhaxeyo labadaan heesood. ...
Cabdi Good ayaa waxa uu ka hadlay fanaaniinta sanadkaan oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo ku ciyaaray aan anshaxa iyo aqlaaqda intaba, Halkaan ka Daawo:- Cabdi Good oo ku dhegan Dalmar Yare & Farxiya Kabayare oo si wadajir ah u wada qaaday Heesta Dhunkasho.
Daawo:- Nin Si Sahlan Ku Noqday Maalqabeen Sababta Maxey tahay?
Warbaahinta Caalamka ayaa aad u hadal haya Mohamed Basheer oo ka bad baaday Shil Diyaaradeed oo ka dhacay Dubai iyo Ninkaan oo noqday iminka Taajir si sahlan ku helay Lacag aad u fara badan . Mohamed Basheer waa 62-jir Muslim ah oo u dhashay dalka Hindiya wuxuuna ka ganacsadaa iibinta gawaarida yar yar kaas oo dhawaan ku jiray dadkii laga ...
Daawo:- Gabar Wariye Ah oo Ballan Qaad layaab leh Sameysay
Everton Fan Zone gabadha soo jeedisa ee Jennifer Jewell ayaa sameysay ballan la mid ah tii Gary Lineker oo isagoo Nigis kaliya wata tebiyay kulanki Premier League u horreeyay keddib ballan qaad uu sameeyay. Lineker ayaa kasoo baxay ballantiisii. Gabadhan ayaana dhankeeda sidoo kale wacad ku martay in ay Nigis kaliya ku tebin doonto Barnaamijkeeda koobaad, haddii Everton ay horyaalka ...
yadoo ay tahay maalinta saaxibtinimada,maanta aynu ka sheekeyno sida uu ku soo bilowday xiriirka Aktarada caanka ah ee Shah Rukh Khan iyo Kajol. Labadan waa kuwa loogu jecelyahay Bollywoodka laakiin isbarashadoodii hore waa xumeyd. Shah Rukh khan ayaa la xusuustaa in Aamir Khan uu u sheegay in Kajol uu neceb yahay oo ay tahay gabar xun. Laakiin saacado kadib Aamir ...
Daawo Sooran Iyo Jawaan oo soo saaray Filim Cusub oo qal qal galiyay Soomaali Badan
Daawo Sida Shaaruu Khaan oo lagu Xidhay Dalka Maraykanka
Aktarka Caanka ah ee Salman Khan oo Ooyin jabsaday kadib marka uu ka qeybgalay——
Salman Khan oo inta badan looga bartay inuu filimada dhexdiisa ku ooyo ayaa markan ooyin jabsaday markii uu ka qeybgalay duugta saaxibkii ay isku fiicnaayee ee Rajjat Barjatya. Rajjat Barjatya ayaa toddobaadkan geeriyooday kaas oo saaxib dhow la ahaa Salman khan. Salman Khan ayaa is celin waayay markii uu tagay guriga saaxibkii. Ninka dhintay ayaa wax ka soosaaray Filimo badan ...
Daawo: Fanaaniinta Xidigaha Geeska oo sheegay Hadal aan laga fileyn